Yintoni i-Muriatic Acid? Iinkcukacha kunye nemisebenzi
Oko Kufuneka Ukwazi NgeMariatic okanye Hydrochloric Acid
I-acid ye-Muriatic yenye yegama lika-hydrochloric acid , i-asidi eqinile. Kwakhona kwaziwa ngokuba yimimoya yetyuwa okanye i- acidum salis . "Muriatic" ithetha "ngokubhekiselele kwi-brine okanye ityuwa". I- formula yemichiza ye-muriatic acid yi-HCl. I-asidi iyafumaneka kwiindawo zokuthengisa zasekhaya.
Ukusetyenziswa kwe-Acidian Acid
I-acid ye-Muriatic inokusetyenziswa kwamashishini kunye nezindlu, kuquka:
I-industrial synthesis ye-vinyl chloride kunye ne-polyvinyl chloride (PVC)
Ukucoca indlu (xa ihlanjululwe)
Ukuveliswa kweemveliso zamakhemikhali ezingaqhelekanga
ukulawula i-pH yamanzi, ukutya kunye neziyobisi
Ukuhlaziywa ngokutsha kweeon resin
Ukucocwa kwetafile ityuwa
Ukuqhayisa ilitye kwimveliso yeoli
Ivela ngokwemvelo kwisisu esiswini sokutya ukutya
I-Muriatic Acid Production
I-acid ye-Muriatic ilungiselelwe ukusuka kwi-hydrogen chloride. I-hydrodrogen chloride ukusuka kuyo nayiphi na inkqubo yeenkqubo ichithwa ngamanzi ukunika i-hydrochloric okanye i-muriatic acid.
I-Muriatic Acid Safety
Kubalulekile ukufunda nokulandela iingcebiso zokhuseleko ezinikezwa kwi-container ye-acid kuba ikhemikhali isonakalisa kakhulu kwaye iyasebenza. Iiglavu ezikhuselekileyo (umz., I-latex), iimfono zamehlo, izicathulo kunye nezambatho ezinqabileyo kwemichiza kufuneka zigqwe. I-asidi kufuneka isetyenziswe phantsi kwendawo yokuvutha komlilo okanye enye indawo kwindawo efanelekileyo. Ukuqhagamshelana ngqo kungabangela ukushisa kwamakhemikhali kunye nomonakalo ophezulu.
Ukuboniswa komonakalo kungonakalisa amehlo, isikhumba, kunye nezitho zokuphefumula ngokungathandabuzekiyo. Ukuphendula kunye ne-oxidizers, ezifana ne-chlorine bleach (NaClO) okanye i-permanganate ye-potassium (i-KMnO 4 ) iya kuvelisa i-klorine enegesi enetyhefu. I-asidi ingathatyathwa ngesiseko, njenge-bicarbonate ye-sodium, kwaye igqitywe kude usebenzisa umthamo wamanzi.
Indlela yokulungisa isisombululo
Indlela yokuguqula iinyawo kwiintshi
7 Iinkcukacha NgeBacteriophages
Iingcebiso ezi-5 zokufaka izicelo kwiiNkqubo zoPhuculo lweeNkcazo kwiZiklinikhi okanye ngeengcebiso ngeengqondo
Inkcitho yeNyukliya esebenzayo Inkcazo
I-15 ye-Music Music Driving Songs
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Promettre' ('Ukuthembisa')
I-Experience My Best Experience
Iimpawu zegrammar yesi-Irish-English
Tyala kwaye Ukhule i Ginkgo
I-Illinois State University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukuqonda i-Capillary Fluid Exchange